कसरी छाला गर्न हानि कारण बिना, घर मा एक तिल हटाउन
शरीरमा प्रत्येक व्यक्ति त्यहाँ Moles र एक नम्बर हो birthmarks। Moles - रंग लागि जिम्मेवार को रोगन - छाला को क्षेत्रहरु, melanin को प्रभाव अन्तर्गत आफ्नो रंग परिवर्तन हो। कसैले धेरै Moles कसैले तिनीहरूलाई धेरै केहि छ। अक्सर, तिनीहरूलाई धेरै गोरो छाला संग मान्छे को शरीर मा उपस्थित छ। त्यहाँ एक व्यक्ति Moles धेरै छ भने, यो आनन्द धेरै लागि प्रतीक्षा छ टिप्पण, राम्रो राष्ट्रिय चिन्ह छ।
अनुहार मा Moles, नियम, यो एक हाइलाइट, आकर्षण थप्ने बनाउन। तर अक्सर तिनीहरूले मात्र सकारात्मक भावना ल्याउन छैन। यो अक्सर भन्ने हुन्छ देखा एक तिल अनुहार वा खुला शरीर को कुनै पनि अन्य भाग मा, सद्भाव परेशान, भद्दा देखिन्छ र उपस्थिति भताभुंग पार्छ। यो Moles हटाउन खतरनाक छ? पारंपरिक बुद्धि, कि हो, खतरनाक छ। डाक्टर आफ्नै यो प्रक्रिया प्रदर्शन सिफारिस छैन। Moles को हस्तलिखित हटाउने, छाला सुनिंनु सामना रगत र पनि क्यान्सर संग समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। तिल अस्वस्थ देखिन्छ तपाईं चिन्ता छ भने, अचानक देखा परे वा उनको वर्तमान दुखाइ को स्पर्श मा भने पनि घरमा एक तिल हटाउन कसरी सोच्न छैन, वृद्धि। तपाईं यसलाई हटाउन चाहँदैनन् पनि भने, शिक्षा त्वकरोग वा ऑन्कोलॉजिस्ट देखाउँछ। कुनै उपाय छाला गर्न भौतिक चोट गरेर घरमा Moles हटाउन implying। कुनै पनि मामला मा उनि चोर्नु वा बाल्न सक्दैन!
को तिल कुनै पनि चासो कारण गर्दैन भने, त्यसपछि तपाईं डाक्टर जाँदै बिना घरमा यसलाई हटाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, तपाईं वास्तवमा मा परम्परागत चिकित्सा को सल्लाह प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तिल हटाउन यो हानिकारक बिना घरमा।
यस मामला मा सबै भन्दा राम्रो उपाय लसुन हुन मानिन्छ। वितरण विभिन्न व्यञ्जनहरु आफ्नो नाम समावेश, Moles देखि छुटकारा गर्न। यहाँ तिनीहरूलाई केही हो:
प्रेस मार्फत लसुन निचोड। डाल परिणामस्वरूप mush लसुन को तिल मा, छाला मा गिरावट छैन प्रयास। यो गर्न, यो वरिपरिको छाला आवरण मुहर गर्न, वा Vaseline धब्बा सम्भव छ। प्रशोधन स्थान प्लास्टर मुहर र4घण्टा भन्दा कुनै काम गर्न अनुमति दिन्छ। दैनिक दोहोर्याउनुहोस्। 3-4 दिन पछि, प्रक्रिया देखिने पहिलो परिणाम हुनेछ।
घरमा तिल हटाउन कसरी रुचि ती लागि अर्को तरिका - लसुन रस को प्रयोग हो। लसुन रस, cheesecloth मार्फत तनावपूर्ण एक कपास प्याड मा राख्न जरूरी प्रक्रियाहरु गर्न, र उपचार साइट को आवश्यकता संलग्न गर्नुहोस्। तपाईँले5मिनेट होल्ड गर्न आवश्यक हो। यो परिणाम प्राप्त गर्न हरेक दिन प्रक्रिया बारम्बार आवश्यक छ।
अर्को, उत्तिकै प्रभावकारी, को अर्थ - 1 को एक अनुपात मा लसुन रस र सिरका वा कागति को रस र लसुन को एक मिश्रण: 1। परिणामस्वरूप लोशन एक दिन तिल धेरै पटक हटाउन गर्नुपर्छ।
कुनै 1 भन्दा बढी ड्रप को मात्रा मा सिरका प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभयो। को तिल आसपास छाला जोगाउन भूल छैन - जला सामना गर्न सक्छ, घरमा तिल हटाउन कसरी को समस्या समाधान मा सहयोग गर्न यी उपकरण प्रत्येक को प्रक्रिया। सिरका प्रयोग 4-5 दिन को एक ब्रेक पछि, एक हप्ताको लागि स्वीकार्य छ, र त्यसपछि प्रक्रिया बारम्बार गर्न सकिन्छ।
पुरातन रस प्राय अनावश्यक Moles देखि छुटकारा प्राप्त गर्न निम्न तरिकामा प्रयोग: एक स्टेम एक क्षेत्र मा, रोटी कान झिकेर pricked तिल किनारा गठन र जमीन माथि बाला मा गाडे कान पछि। यो तिल को स्पाइक क्षय हुनु रूपमा बित्तिकै गायब हुनेछ विश्वास थियो।
ब्राजिलियन Waxing - कसरी गर्न? समीक्षा
कसरी कर्न्स छुटकारा गर्न?
सुंदरता र युवा संरक्षण गर्न वेनिला तेल
टेनिंग के हो? हानिकारक टेनिंग छ? तन के राम्रो?
ठूलो मिठाई लागि नुस्खा: चकलेट muffins Bake
सम्पूर्ण गेहूंको आटाबाट उपयोगी कुकीजहरू: उत्तम खाना पकाउने व्यञ्जनहरू
सानो कोठा को भित्री: एक आधुनिक समाधान
"पूल" (Sokolniki): तस्बिर समीक्षा
Hodgkin गरेको लिंफोमा
कसरी घर मा बाल डाई कपाल धुन?
"Eliminal" (जेल): प्रयोग, analogs, समीक्षा लागि निर्देशन
अजरबैजान गणतन्त्र: शहर र उनीहरूको संक्षिप्त विवरण